दिल्ली र पञ्जाब भिड्दै, आज सन्दीप खेल्छन ? - Everest Dainik - News from Nepal
दिल्ली र पञ्जाब भिड्दै, आज सन्दीप खेल्छन ?
काठमाडौं, वैशाख १० । इण्डियन प्रिमियर लीग (आइपीएल) को ११ औं संस्करणको आफ्नो छैटौं खेलमा आज दिल्ली डेयरडेभिल्स आफ्नो घरेलु मैदान फिरोज शाह कोट्लामा किंग्स एलेवेन पन्जाबसँग भिड्दै छ । यो दिल्लीका लागि आफ्नो भाग्य बदल्ने खेल हुनसक्छ ।
दिल्लीमा नेपाल युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध छन् । तर पाँच खेल खेलिसक्दा दिल्लीको प्रदर्शन निकै नाजुक छ र सन्दीले अहिलेसम्म खेल्ने मौकै पाएका छैनन् । अथवा पाँच खेलसम्म सन्दीप दिल्लीका प्लेइङ ११ मा नै परेका छैनन् । पाँच खेलमध्ये ४ खेलमा हारे व्यहोरेको दिल्लीले एकमा भने जित हात पारेको छ ।
यसअघिका सबै खेल दिल्लीले बाहिरै खेल्य भने आज पहिलो पटक आफ्नो घरेल मैदान फिरोज शाह कोट्लामा खेल्दै छ ।
अंक तालिकाको पुछारमा रहेको दिल्लीसँग घरेलु मैदानमा बलियो देखिएको पन्जावसँग अंक खोस्दै अन्य खेलहरुका लागि आफ्ना खेलाडीलार्इ उत्प्रेरित गर्ने मौका भने छ। दिल्लीले घरेलु मैदानमा पन्जावविरद्ध जितका लागि मात्र नभर्इ प्रतियोगितामा जितको लय समात्ने खेलका रुपमा पनि सदुपयोग गर्न खोज्नेछ।
दिल्लीका लागि पन्जाबसँग दुर्इ अंक खोस्नु त्यति सजिलो भने छैन्। पन्जाब शीर्षको चेन्नाइ सुपरकिंग्ससँग समान ८ अंक भएपनि रनरेटका आधारमा दोस्रोमा रहेको टोली हो। केएल राहुल र क्रिस गेल यस सिजनमा सर्वाधिक सफल ओपनर जोडीका रुपमा देखिएका छन्।
यस्तै पन्जावको मध्यक्रमपनि त्यतिकै शशक्त छ। मध्यक्रमका मयंक अग्रवाल, करुण नायर र आरोन फिन्चले टोलीलार्इ दरिलो ब्याकअप दिदै आएका छन्। एक समय भारतका हार्ड हिटरका रुपमा पहिचान बनाएका विरेन्द्र सेहवागको मेन्टरसीपमा रहेको पन्जावका खेलाडीहरुले यस सिजनमा उनकै शैली अपनाएका छन्।
दिल्लीका ऋशब पन्त र जोसन रोहले राम्रो खेलिरहेका छन्। अघिल्लो सिजनमा पन्जावबाट खेलेका ग्लेन म्याक्सवेलका लागि आजको खेलमा पन्जावलार्इ रिटेन नगर्नुको जवाफ दिने मौका छ। कप्तान गौतम गम्भीरले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। यस सिजनमा उनको स्ट्राइक रेट जम्मा १ सय ८ को मात्रै छ। जुन टी(२० क्रिकेटमा सामान्य मानिन्छ।
यसअघि यसै सिजनको दोस्रो खेलमा पन्जाव र दिल्ली माहोलीमा भिडेका थिए। दिल्लीले दिएको १ सय ६७ रनको लक्ष्य घरेलु मैदानमा पन्जावले ७ बल बाँकी छदै ४ विकेट गुमाएर भेटाएको थियो।उक्त खेलमा केएल राहुलले दिल्लीविरुद्ध १४ बलमा ५० रन जोड्दै आइपीएलको सर्वाधिक छिटो अर्धशतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान कायम गरेका थिए। पन्जावकै करुण नायरले र दिल्लीका कप्तान गौतम गम्भिरले अर्धशतक प्रहार गरेका थिए।
ऋशब पन्तले दिल्लीका लागि उच्च स्ट्राइक रेटमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सुरुवाती ११ देखि २० ओभरको बीचमा १८१ को स्ट्राइक रेटमा ब्याटिङ गरिरहेका पन्तले ३० बल खेलिसकेपछि भने २७२ रनको स्ट्राइक रेटमा आक्रामक ब्याटिङ गरिरहेका छन्। अौषतमा उनको स्ट्राइक रेट १८४।७ को छ।
यस सिजनमा तीव्र गतिको बलिङमा गौतम गम्भीर निरिह देखिएका छन्। चार खेलमा उनले तीव्रगतीका ४७ बलको गर्दा ३८ रनमात्रै जोड्न सकेका छन भने तीनपटक आउट भएका छन।
पूर्व पन्जावका कप्तान ग्लेन म्याक्सवेलको वर्तमान पन्जावका कप्तान रविचन्द् आश्विनविरुद्ध राम्रो रेकर्ड छ। म्याक्सवेलले आश्विनका ४९ बलको सामना गर्दा १ सय ७ रन हिर्काएका छन। जसमा उनको स्ट्राइक रेट १६३।७ को छ।
पन्जावका ओपनरद्धय गेल र राहुलले यस सिजनमा उनीहरुको टिमले बनाएको मध्यो ५५।४ प्रतिशत रन बनाएका छन्।
सन्दीपका लागि फाइदा पुग्ने विकेट
दिल्लीले नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछानेलार्इ अक्सनबाट २० लाख भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। पाँच खेल खेलिसक्दा पनि दिल्लीले सन्दीपलार्इ मौका दिएको छैन। यद्दपी नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरु भने सन्दीपले आइपीएल खेल्ने पर्खाइमा छन।
दिल्लीको होम मैदान फिरोज साह कोटला भने स्पिनरका लागि फाइदा पुग्ने विकेट हो। यसै मैदानमा अनिल कुम्बलेले पाकिस्तानका विरुद्ध टेस्ट क्रिकेटको एकै पारीमा १० विकेट लिएका थिए। यस्तै भारत र न्यूजील्याण्डका बीच गत नोभेम्बरमा यसै मैदानमा अन्तिम टी(२० म्याच भएको थियो। त्यसमा खसेका १० विकेटमध्ये ६ विकेट स्पिनर्सले लिएका थिए।
स्पिनर्सलार्इ फाइदा पुग्ने यस विकेटमा २०१६ को यू(१९ विश्वकपमा ह्यट्रिक लिएका तथा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन(२ का म्यान अफ द सीरिज सन्दीप लामिछानेले मौका पाउछन् कि नाइ त्यो भने खेल सुरु हुनुअघि मात्रै थाहा हुनेछ।
यद्दपी दिल्लीको सम्भावित सुरुवाती एघार भने यस्तो छ:
गौतम गम्भीर (कप्तान) जोसन रोय, श्रीयेश एेयर, ऋशब पन्त, ग्लेन म्याक्सवेल, विजय शंकर, क्रिश मौरिस, राहुल टिविसिया, शाहबाज नदिम रजयन्त यादब, हर्षल पटेल, ट्रेन्ट बोल्ट
ट्याग्स: IPL, sandeep